Tilmaan kU saabsan Isugu Tagitaanka | Washington State Coronavirus Response (COVID-19)
Tilmaan kU saabsan Isugu Tagitaanka
Waa tan waxa aan ognahay: la kulanka dadka aan la noolayn - xitaa saaxiibbada dhow iyo qoyska - waxaa laga yaabaa inuu ku faafo COVID-19. Markasta oo dad badan aan la falgalno kulan, isla markaana uu sii dheeraado isdhexgalka, ayaa sareysa halista infekshinka.
Tallaalka COVID-19 hadda waa la heli karaa, waxay qaadan doontaa bilooyin kahor intaan qofkasta oo ku nool gobolka Washington la tallaalin. Waxay muhiim u tahay qof walba inuu sii wado xirashada maaska, qoofki walbo lix fuudh oo derathaan, iyo ka fogow dadka aadan la nooleyn.
Waqtiga xafladda inta lagu jiro COVID-19
Sida aan u baashaalno ayaa u baahan in wax laga beddelo. Way adagtahay. Waxaa jira qaabab kale oo lagu kulmo oo la isku arko markaan fog nahay.
Shaashadda is-urursada | Hubaal, isku mid ma noqon doonto, laakiin jadwalka dhawr kulan oo dalxiis oo dalxiis ah ayaa kaxayn kara kala-go'idda. Isku soo wada duub khadka tooska ah ee internetka si loo karsado, wada cabba kafeega ama shaah inta aad ku jirtaan internetka, loo sameeyo mashruuc farshaxan ah, la dhagaysto liistada ciyaarta, ama la akhriyo sheekooyinka waxay abuuri kartaa xoogaa wada jir ah oo aan jecel nahay. Tixgeli aagagga waqtiga markaad jadwalka sameyneyso, oo hubi in dad kasta oo aan farsamada casriga ah aqoon u helin ka hor caawimaad si loogu daro.
Nobad Iistusa | Waqtiga oo adag, waxay dareemi kartaa wanaag in la joojiyo oo laga fiirsado waxyaabaha aan ugu mahadnaqno, ha ahaato qof, xayawaan, goob ama wax. Muuji baroodyadan dhalaalaya adoo qoraya ama u diraya qoraalo, qoraalo ama emayl dadka noloshaada si aad u muujiso sababta aad ugu mahadsantahay iyaga.
Foornada fog | Halkii aad wada joogi lahayd, waxaad u qori kartaa suxuunta saaxiibbada iyo qoyska oo aad u geyn kartaan midba midka kale gurigiisa. Ama u keen uun maaddooyinka saxanka ama cuntada. Kadib, gal barnaamijka aad kuhesho sheekada fiidiyowga ah si aad wax ugu karsatid ama uqodatid.
Baro sida wax loo kariyo | Xullo raashin qoys aad jeceshahay, la wadaag liiska walxaha kahor waqtiga asxaabtaada ama qoyskaaga, ka dibna si wada jir ah isugu imow si aad isugu daydo cunto karinta ama dubista.
Habeen ciyaar | Haddii aad ku dhex baraartid tartanka, samee kulamadaada macmalka ah ee ku saabsan wax ka badan wadahadal. Ciyaar ciyaar, isku day duubis dublamaasiyadeed, bandhig hibo ama ugaarsi ugaarsi oo kooxuhu ku tartamaan inay ka helaan waxyaabo caadi ah oo aan caadi ahayn oo ku xeeran gurigooda.
HUBINTA AMMAANKA QAADASHADA
Fikradda ugu fiican ayaa ah inaad ka fogaato dadka aadan la nooleyn. Markaad xulashadaas sameyso, waxaad gacan ka geysan doontaa xakameynta faafitaanka COVID-19. Haddii aad go'aansato inaad la shiraan dad ka baxsan reerkaaga, marwalba waxaa jirta khatar faafitaanka cudurka COVID-19. Tilmaamaha hoose waxay kaa caawin karaan yareynta halistaas, laakiin weli waxaa jiri doonta khatar.
Xusuusnowna, intaan dadku isu imaan, hubi shuruudaha xaddidaadda gobolkaaga aad ku nooshahay (goobta oo ku qoran Ingiriis).
Horey u qorshee. Ikhtiyaarka ugu ammaansan ayaa ah inaad la shiraan qof kasta oo aanad la noolaa. Haddii aad go'aansato inaad si shakhsi ah isugu timaado, si dhab ah ula caddee asxaabtaada iyo qoyskaaga sidaad u noqon doontid ka dhig mudnaanta mudnaanta amniga markaad waqti wada qaadanaysaan. Samee xeerar aasaasi ah oo ka caawin doona qof walba inuu ogaado waxa laga filayo.
Dib u eeg liiska martidaada.
Marka hore, sii yareyso - in ka yar shan qof oo aadan la noolayn. Hubso inaad haysato meel qof walba uu ku nagaan karo lix fuudh.
Marka xigta, ka fikir cida aad martiqaadayso. Ma jiraan dad laga yaabo inay ku jiraan nooc khatar sare ah ama caruur? Tixgeli baahiyaha gaarka ah iyo taxaddarradu inay qayb ka yihiin qorshayntaada. Xusuusnow, waa ficil daryeel si loo go'aansado in aan lagu martiqaadin dadka halista sare ugu jira inay aad u bukoodaan COVID-19. Raadi siyaabo kale oo aad isku xidho.
Hal abuur yeela. Ka fikir siyaabaha nabdoon ee aad isugu ururin karto oo aan ku lug lahayn wadaagista cuntada. Xadhig kor u qaad oo ku kulan socod ama waxqabad kale oo bannaanka ah - xusuusnow inaad lix mitir u dhexeyso.
Si siman u fidi. Diyaarso fadhiga si qof kasta uu u jogi karo lix fiit markasta. Iska ilaali inaad ku shiraan miiska cuntada.
Hoos u dhig. Xaddid tirada martida shan qof ama wax ka yar oo aanad la noolaa. Hubso in booskaagu u oggolaanayo qof walba inuu lix fiid u kala fogaado.
Gaabi. Isu ururi wax ka yar laba saacadood. Waqtiyada gaagaaban waxay siinayaan COVID-19 fursad yar inuu ku faafo, waxayna yareyn doontaa in qof uu u baahdo inuu isticmaalo musqusha. Kulannada gaagaaban sidoo kale waxay fududeynayaan in gacmaha iyo dusha si wanaagsan loo nadiifiyo.
Hubso caafimaad. Weydii haddii qof uu ku dhacay astaamo sida qufac, qandho ama neefsasho gaaban, labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Weydiiso martida inay hubiyaan heerkulkooda kahor inta aysan imaan. Qof kasta oo qandho qaba - ama calaamado kale soo arkay ama og inuu u ku dhacay qof qaba COVID-19 2-dii toddobaad ee u dambeeyay-waa inuu guriga joogo.
Tixgeli carruurta. Carruurtu waxay dhibaato kala kulmaan inay ciyaaraan lix cagood, sidaa darteed xijaabashada oo aan lala wadaagin waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan ama cuntada ayaa noqon kara qorshaha ugu nabdoon ee waxqabad. Xusuusnow: caruurta da'doodu ka yar tahay labo sano waa inaan waligood xijaaban!
Samee qorshe cunto. Xulashada ugu ammaansan ayaa ah inaad qorsheyso isku imaatinkaaga inta u dhexeysa cuntada. Haddii aad bixiso cunto, u kala saar cuntada kahor waqtigeeda shaqsi kasta oo ka fogow weellada iyo weelka guud.
Is baar. Hel tijaabada COVID-19 si aad u hubiso inaad diidmo leedahay. Waxay qaadan kartaa maalmo si aad u hesho natiijada baaritaankaaga, waana inaad karantiil ahaataa guriga inta aad sugeyso. Haddii aad tijaabiso diidmo, weli waxaad u baahan tahay inaad xirato maaskaro oo aad ka fogaato dadka kale marka aad bulshada dhex galeyso.
Shuruucda la raacayo ee loogu talagalay dadka ku dhex jira gudaha. Haddii aad ka fikirayso dadka gurigaaga imanaya, waa inay raacaan xeerarka gobolka u yaal (goobta oo ku qoran Ingiriis). Tani waa fikrad isku mid ah oo ay dadku ku kulmaan banaanka.
Dhaq hore iyo wax badan. Nadiifi gacmaha. Haddii aysan jirin marin saxanka lagu kariyo, bixi gacmo nadiifiye.
Xidho weji daboolan markasta. Marooji dheeraad ah gacanta ku hayso haddii dadku iloobaan.
Carruur iyo waji-daboolan. Caruurta ka yar labo sano waligood ma xiran karaan maaskaro. Marka lala joogo dadka ka baxsan gurigooda, carruurta da'doodu tahay labo illaa afar waa inay xirtaan dabool wejiga ah iyadoo lala socdo kormeerka dadka waaweyn, carruurta shan iyo wixii ka weynna waxaa looga baahan yahay inay xirtaan indho shareer. (Haddii aad leedahay cunug leh xaalad caafimaad oo hore u jirtay oo aad ka walwalsan tahay maaskaro, la tasho dhakhtarkaaga.)
Wadaag ma jiro. Ka fogow digaaga, waxyaabaha lagu cunteeyo ama cuntooyinka kale ee la wadaago. Weydiiso martida inay keenaan koobabkooda, saxanadooda iyo weelashooda u gaarka ah. Ama, si ka sii wanaagsan, u qorshee iskuulkaaga yar inta u dhexeysa cuntada. Xusuusnowna, ha la wadaagin waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan ama waxyaabaha kale, kana fogow dusha meelaha la wadaago.
Nadiifi, nadiifi, nadiifi. Jeermi jeermi jeermiska dusha lagu isticmaalo kahor, inta lagu jiro iyo kadib.
Ka fogow xiriir dhow. Dhoola caddeyn iyo hawo soo dhaweyn kaliya marka aad la jirto dadka aadan la nooleyn. Sharciga masaafada lix-fuudh ah wuxuu khuseeyaa carruurta ka baxsan qoyskaaga sidoo kale. Mar labaad, dhoolacadeyn iyo hawo soo dhaweyn kaliya! Mana la wadaagi karo alaabada lagu ciyaaro ama cuntooyinka fudud. Tani way adag tahay, laakiin u diyaari carruurta-iyo awooweyaasha-waqtiga kahor.
Daaqadaha fur. Haddii martidaadu ay buuxiyeen dhammaan shuruudaha xaddidaadda ururinta gudaha oo aad go'aansato inaad yeelato isku imaatin gudaha ah, daaqadaha ka fur qolalka ay dadku isugu imaan doonaan si loogu oggolaado hawo habboon. Weydiiso martida inay si diiran u labistaan!
Kadib markaad urursato
Dhaq gacmaha (markale). Ku dhaq labtan ilbiriqsi saabuun iyo biyo.
Nadiifi. Ku nadiifi dhammaan dusha laga yaabo inay taabteen martida sida miisaska miiska, miisaska, albaabbada albaabka iyo qalabka musqusha, marka hore ku dhaq saabuun iyo biyo, ka dibna wakiilka jeermiska dila.
La soco astaamaha. Uga dig dadka kale kulanka haddii uu jiro imtixaan togan oo ka dhex dhaca qof kasta oo ka soo qayb galaya. Baro wax badan oo ku saabsan waxa la sameeyo haddii lagaa qaado.
Haddii aad taqaanid qof la halgamaya ...
Gaadho. U xaqiiji inaad iyaga halkaas u joogto. Fikradaha qaarkood sida loo muujiyo taageerada iyadoo la ilaalinayo masaafada jirka:
U samee maalin ama wakhti caadi ah jeeg wicitaan ama fiidiyow lagu sheekeysto
U dir iyaga warqad ay ku qoran yihiin ereyo dhiirigelin iyo jacayl ah
Ka daadiso daawada guriga lagu sameeyo, ka soo qaad maqaayada ay jecel yihiin, ama buugga ay ugu jecel yihiin
Dhegeyso xukun la’aan.
U xaqiiji in ay caadi tahay in la dareemo murugo, walwal iyo cidlo inta lagu jiro waqtigan, iyo in tani aysan waligeed ahaan doonin. Sidoo kale xusuusiso inay jiraan caawimaad ay heli karaan haddii ay u baahdaan.
Haddii ay suurtagal tahay, u diyaarso labadiinaba in la baaro, ka dibna is karantiil muddo labo toddobaad ah. Markaa waxaad qorsheyn kartaa booqasho dheer si aad uga caawiso inaad iyaga siiso taageerada iyo raaxada ay u baahan karaan xilligan sannadka ah.
Haddii aad la kulantid walaac COVID-19 awgood, wac khadka “Washington Listens” ee 833-681-0211 si aad u hesho taageero iyo ilo. Caawinaad luqadeed oo bilaash ah ayaa la heli karaa. Garaac 711 oo loogu talagalay Adeegga Gudbinta Washington.